marary ny foot gasy - Dinika forum.serasera.org
marary ny foot gasy
Fitohizan'ny hafatra : marary ny foot gasy
amoureus - 05/07/2003 14:27
tena tsy avotra intsony ity foot-ball malagasy ity.Ny vahaolana omeko dia izao:esory daholo izay tsy mamely rehetra fa aza asiana henatra na tahotra.
Ary aoka izay ity efa akaiky match ity vao mikoropaka;tokony tsy hajanona mihintsy ny regroupement.ireo efa eto antoerana tokony hizatra miaraka foana,indrindra fa ny defenseurs.
hita izao fa ny defense no mahavoa antsika ary ny famonoam-baolina tsy ao mihintsy.Omanina tsara ny tanora fa tsy sakatsakanana.
Ary sarotra be ve ny manokana terrain tsara be iray hanazaran'ny scorpion tena.Izay fa mba omeo ny hevitrareo.
xxx - 05/07/2003 14:33
Tsy ny foot ihany fa izay taranja rehetra ka natao hifaninanana dia mila fanovana daholo
nyandry - 06/07/2003 15:28
NYtena tsy mampandroso ny foot ny gasy anie dia ny fahantrana e!tsy ampy mihintsy ny infrastructures hanaovana sport eto amintsika.Maro ny mihevitra fa tsy tokony handany vola @ izany fanamboarana kianja filalaovana izany.Aza adino anefa fa anisany mampiray ny vahoaka tady ho saratsarahan'ny saranga sy ny fiaviana io foot io ka tsy tokony hatao ambanin-javatra.
hery - 07/07/2003 18:32
Io angé lé efa nolazaiko hoe marina ihany ny an'i Ndalana é.
- Nesoriny i Hans Heinegger dia tonga dia nikorontana ny gasy hoe mahay io fa nahoana no esorina
- Tsy nekeny i Ahmad prézidan'ny FMF dia tonga dia nidongy nitory tany amin'ny FIFA...
izao in akory no vokatra eo? Donga (0) foana... Maurice avy aza mandresy antsika.
Marina ihany ny an'i Ndalana.
randria2 - 08/07/2003 12:45
Tsy lasa intsony raha tsy amboarina hatrany amin'ny fotony mihintsy ny rafitry ny baolina kitra gasy sy ny mpitantana azy e.
Donga foana no azo raha izao no mitohy.
Na i Ndalana na i Maradona, na i Platini na i Pélé no atao ministry ny fanatanjahantena gasy angaha hampiova inona raha tsy ny toetsaina no amboarina?
Angaha i Ndalana no handaka sy hampiditra baolina ao anaty haraton'ny Ejipsiana sy ny Môrisiana ?
Na i Jacques Santini sy Alex Ferguson sy Guus Hiddink sy Bruno Metsu sy ireo mpanazatra mahay indrindra eran-tany
aza no atambatra sy antsoina hanazatra ny Scorpions dia tsy lasa io.
Tsy vahaolana ny "solition pommade" sy ny petatoko e.
Afaka telo volana ve ny CAN dia androany ianao vao hitady olona sy hikoropaka etsy sy eroa? Dia resy avy eo dia hoe i Ranona no diso?
Ny an'ny olona efa hatry ny oviana no nanomanany ny ekipany.
Tsy hitady "bouc émissaire " foana no atao raharaha isak'izay misy tsy fahombiazana. Jereo ny tena fototr'aretina e.
Former-o tsara ny boay kely toy ny AJESAIA dia ny Mondial 2010 no omanina tsara.
tsimisitoazy - 13/01/2004 15:52
za reto mba tia baolina ihany an!fa ny tena hitako lesoka amintsika dia ny terrain aloha ny voalohany satria t@ izaho nandalo tany dia zao no nataon'ny ankizy joueur iray tamiko hoe ry zareo hono tsy mba mahazo terrain zany raha tsy efa akaiky ny match fa mpilalao ny fivondronana no mahazo ny terrain tsara ao mahamasina izany , ary raha tsy efa akaiky 2mois vao mivondrona ny equipa national zay aloha dia efa tena hita fa lesoka be mihintsy simba koa ny moral satria ohatra fotsiny no omeko notenen'io mpilalao io dia tsy nomena vola ry zareo t@ jeux des iles farany teo nefa nahazo daholo ny taranja hafa ka ry zareo indray no miala vola na ny papier toilette na ny rano hosotroina sy ny sisa ary io joueur io ary niteny mihintsy fa tsy anao intsony izy fa tsy haiko na mbola manao izy na tsy intsony marina
ny gaul fa maninona kay i emamy no nesorina fa olona tsy aninona tsy aninona ireny no solony eo sa dia misy resaka politika ao ambadika ao satria i emamy joueur na arema dia tsy iza izany fa i ramercie be tanana na antsirabe taloha
sady misy resaka ihany koa ao hoe i ranona joueur ranona ka izy no alaiko sy ampidiriko ao tena mahita aho fa betsaka ny ankizy mahay baolina ao fa hita fa tsy dia mahitahita dia eo no raisina ka dia teo tokoa moa zany no raisina koa inona sady misy tsy mety ao @ fitondrana ao na ny vao2 na ny taloha samy mahazo tsiny daholo satria mifampiandry kendritohina daholo sady mampifandrafy joueur
no sady samy tsy tokony ao @ io toerana io daholo satria tsy misy manana fo sportif ka mandoto rano ny tanindrazana fotsiny
ny aty indray na tsy misy match ary dia toa manao entrainement foana na andro mangatsiaka tahaka ny inona ary dia lasa foana na ny atoandro nany alina zany
delvechio - 08/04/2004 18:10
ie marary ny mpanao foot malagasy..... marary kibo fa tsy ampy sakafo
ikaretsaka - 10/04/2004 05:42
tsy sakafo ihany
gable - 15/04/2004 15:46
Ka ny dirigeants gasy anie de ilay fifa goal no mahamay azy ireo e!Satria mitetika ny ahazo sosy hameno paosy daholo e!Jereo fotsiny t@ le vola be nividianana an'ilay trano hatao siège ny fmf!Ka raha tsy za no ragidro ka hividy an'io en milliards!
fijo - 17/04/2004 01:47
izay ny loza any.tsy ilay taranja no tiana handroso fa ny paosy no fenoana be hany ka tsy tafavoaka mihintsy.
totty - 15/12/2004 01:20
mandriga ny foot malagasy,ny antony mampandriga azy dia tsotrafotsiny,1manao izay hamenoana paosy fotsiny nyselectionneur
faha 2 izay manome vola ho an ireo s... no miakatra eny ambony kianja,eny na dia tsy mahay mandaka baolina aza izany,faha 3ny ekipa mahay avy any amin ny faritany ka mahaybaolinadia vitsy no voahantso ho scorpion, ny antony diasatria ry zareo avy any amin nyfaritany ireo tsy dia misy sosy homena ny s...,ka izany no mahatonga ny foot malagasy mandriga na mandehailany ohatran ny kiraron i beminah
ratiavao - 15/12/2004 19:32
tsy marary izany ny foot gasy efa miala aina raha izay no azo ilazana azy, mila miditra bloc opératoire mihitsy
haritina - 08/01/2005 13:02
Tsy mbola ampy tetika isika gasy fa misy antitra ny joueur mbola recruter-na ihany aiza ny releve e!
tokony hanao deplacement maro² izany hoe rencontre amicale internationale
totty - 10/02/2005 21:55
marinamihitsy izany voalazanao izany ry haritina,fa maninona no mbola ireny goaika antitra ireny foana no antsoina fa tsy ireo zandry kely aty aoriana,sa manao sisim bola ireo